Akhri: Dabley weerar ku qabsatay Jaamcadda Gaarisa * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhri: Dabley weerar ku qabsatay Jaamcadda Gaarisa
By A warsame	 Last updated Apr 2, 2015
Mareeg.com: Dabley hubaysan ayaa weerar ku qaadday jaamacad ku taalla magalada Gaarisa, ee gobalka waqooyi bari ee dalka Kenya.
Wararku waxa ay sheegayaan in dableydu ay weli ku jiraan jaamacadda, islamarkaana la maqli karo dhawaqa rasaasta iyo qaraxyo.
Weriyiyaasha ku sugan Gaarisa ayaa soo sheegaya in qiiq uu ka baxayo dhismaha jaamacadda, ciidammada ammaanka ee Kenyana ay halkaasi ku qulqulayaan.
Sidoo kale gawaarida gurmadka deg dega ayaa ku sii qulqulaya goobta. Jaamacadda ayaa magaalada waxa ay u jirtaa ilaa iyo 3 km.
Ma ay jirto weli wax faahfaahin ah oo ku aadan khasaaaraha ka dhashay weerarkaasi, iyadoo la sheegayo in dableyda hubeysan ay dad badan ku heystaan dhismaha Jaamcadda.
Warka qaar ayaa sheegaya in 2 qof oo ka tirsanaa ilaalada jaamacadda Garissa la dilay, tiro kalena la dhaawacay. Hay’adda laanqeyrta cas Kenya ayaa sheegtay in dhaawaca laba askari iyo arday la geeyay Isbitaalka.
Qaar ka mid ah ardayda wax ka barata Jaamacadda ayaa la sheegay iney ka boodeen darbiyada, halka qaar kale oo badan iyo macalimiintoodu ay ku jiraan gudaha.
Macallimiinta iyo ardayda ayaa la sheegay in qaarkood gabaad ka dhigteen gudaha Masjid ku yaalla Jaamacadda.
Ardaydii kasoo baxsatay gudaha Jaamcadda ayaa sheegay in dadka weerar soo qaaday gaarayeen ilaa 5 hubeysan.
Ma cada cidda weerarkan ka dambeysa, hasayeeshee Al-shabaab ayaa marar badan weerar ka fulisay gudaha magaalada Gaarisa iyo magaalooyin kale oo Kenya ka tirsan, tan iyo 2011-kii markaa oo ciidammada Kenya ay galeen Soomaaliya.
Xuuthiyiinta oo ka dagaalamaya bartamaha Cadan